MON PHARMACY: ဆေးဝါးပညာရှင်များ လူနာတွေကိုမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်း၎မျိုး
ဆေးဝါးပညာရှင်များ လူနာတွေကိုမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်း၎မျိုး
ဆေးဝါးပညာရှင်များ(Pharmacists)ရဲ့အလုပ်များထဲက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတော့ ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်း(counselling)ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့လူနာဖောက်သည်တွေအကြား မည်သည့်စကားပြောဆိုမှုမဆို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း(interviewing)နဲ့ အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း(assessing)တို့နဲ့ အစပြုပါတယ်။ ဆေးဝါးပညာရှင်တွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့အကြံပေးခြင်းအတွက် သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေဆီက မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိရန် ဘာတွေမေးမြန်းသင့်ပါသလဲ။ ကဲ- အောက်ပါအချက်တွေကို မေးမြန်းကြရအောင်.....
#၁။ ဆေးကို ဘယ်သူကသောက်မှာလဲ။ (Who will be taking the medication?)
ဆေးကို သောက်မဲ့သူက ကလေး(သို့)လူကြီးလား သိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ pharmacistတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့ဆေးညွှန်းစာမပါဘဲ တစ်ချို့ ဆေးဝါးများကို အလွယ်တကူကလေးတွေအား မပေးဖို့ သင်သိရပါမယ်။
အလားတူ လူနာရှင်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေလျှင် သတိချပ်ရမယ့် ကြို တင်ကာကွယ်မှုအချို့ ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်မသေချာပါက ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကို ဆေးပေးရာမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် ဆေးဝါးလက်ကိုင်စာအုပ်(drug handbooks)အချို့ကို သင်အမြဲ ရည်ညွှန်းနိုင်ပါတယ်။
#၂။ သင်ဘာဆေးတွေသောက်နေရတာလဲ။(What medications are you taking?)
ဖောက်သည်လူနာက ဆေးတစ်မျိုး(သို့) တစ်မျိုးထက်ပိုသောက်နေရတဲ့ဆေးတွေ ရှိသလားဆိုတာ ဆန်းစစ်ဖို့ ဒီမေးခွန်းမျိုးကို မေးမြန်းပါ။ ဒါကို သိခြင်းအားဖြင့် သူတို့သောက်နေရတဲ့ဆေးအားလုံးမှာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်မယ့် ဆေးအချင်းချင်း တန်ပြန်သက်ရောက်မှု (drug-to-drug interactions)ကို ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
သင် သောက်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားပေမယ့် မသောက်ဖြစ်တာ ဘာဆေးတွေလဲ။
(What medications are you supposed to take but are not?)
လူနာတွေဟာ သူတို့အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးအချို့တွေကို မသောက်ရတဲ့ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ သို့သော် ဘယ်အကြောင်းပြချက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သင်က သူတို့တွေကို သောက်ဖို့ဘယ်လောက်ကြီးကြောင်းကို အလေးပေးထောက်ပြပေးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ- လူနာတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ ပိုတက်စီယမ်ဆေး(potassium drug)ကို ဆေးရဲ့အနံ့နဲ့အရသာကြောင့် သောက်ဖို့ရပ်လိုက်ပါတယ်။ သို့သော် သူ့ရဲ့ လက်ဆစ်(Lasix)ဆေးကိုတော့ ဆက်သောက်နေတယ် ဆိုကြပါစို့။ အကယ်၍ ဒီလိုသာဆောက်သောက်သွားနေရင် သူဟာ နှလုံးခုန်ပုံမမှန်ခြင်း(cardiac arrhythmias) ဖြစ်နိုင်ကာ (သို့) အဆိုးရွားဆုံးအနေနဲ့ နှလုံးရပ်(cardiac arrest) တဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိရပါမယ်။ ဒါကြောင့် လူနာတွေကို Lasixနဲ့ potassiumကိုပေးတဲ့အခါမှာ အမြဲတမ်းတွဲသောက်ဖို့ သတိပေးရပါမယ်။
သင့်ပြောပြထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ဆေးတွေကိုသောက်နေပါသလား။
(Do you take medications inadifferent way from what was told to you?)
တစ်ချို့လူနာတွေက နာကျင်မှု ပျောက်မသွားသေးတာကြောင့် ပိုက်ဆံချွေတာချင်တာရယ် (သို့) ဒုတိယဆေးတစ်ဖုံစာသောက်ဖို့အတွက်ရယ်ဆိုပြီး ဆေးကိုတစ်ခြမ်းခြမ်းသောက်ကြပါတယ်။ သူတို့ကို အထက်ပါမေးခွန်းမျိုးမေးမြန်းခြင်းဖြင့် မလုံလောက်တဲ့ဆေးပမာဏ (သို့) များပြားပိုလျှံတဲ့ဆေးပမာဏလား ( under- or overdosing of medications)ဆိုတာကို ရှင်းလင်းစွာ အာရုံစိုက်ဖို့ သင်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ရပါမယ်။
#၃။သင့်မှာအခြားကျန်းမာရေးရောဂါအခြေအနေများရှိပါသလား။(Do you have other health conditions?)
တစ်ချို့ဆေးတွေဟာ ရောဂါအချို့ကို အမှန်တစ်ကယ်ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဝယ်ထားတဲ့ဆေးတွေက သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအရ သုံးစွဲရန်အန္တရာယ်ရှိမရှိကို သေချာစစ်ဆေးပါ။
#၄။သင့်မှာ ဘာဆေးနဲ့ဓါတ်မတည့်တာတွေရှိသလဲ။(Do you have any allergy?)
ဓါတ်မတည့်ခြင်းဟာ သင်တို့ရဲ့လူနာဖောက်သည်တွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်လျှင် သူတို့ရဲ့ဆေးဝါးအတွက် တစ်ခြားဆေးတွေနဲ့ (an alternative)ပြောင်းပေးဖို့ သင်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် သင်မသေချာလျှင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ယေဘူယျအားဖြင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ အဖြေများကို အပြည့်အဝရရှိရန် လိုအပ်တဲ့အခါမှာ မေးမြန်းတဲ့မေးခွန်းများ
(open-ended questions)နဲ့ လိုရင်းတိုရှင်းတဲ့မေးခွန်းများ( close-ended questions)နှစ်မျိုးစလုံးကို မေးမြန်းပါ။ အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှု(good communication skills)ကို ကျင့်သုံးဖို့ သတိရပါ။ မျက်လုံးချင်းထိတွေ့(good eye contact) ပြောဆိုတတ်တဲ့အကျင့်ကို လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားအမူအရာ(gestures)နဲ့ မျက်နှာအနေအထားများ(facial expressions )ဟာ သင့်ရဲ့စကားပြောဆိုမှုမှာ ဘယ်လောက်အောင်မြင်သလဲဆိုတာ ကြီးမားစွာအထောက်အကူပြု တဲ့အတွက် သေချာဂရုစိုက်သတိပြုပါ။
ဒါကြောင့် သူတို့ထံမှ မဖြစ်မနေသိရမဲ့အချက်အလက်များကို သိရှိထားတဲ့အခါမှသာ သင်ဟာ သင့်လူနာတွေအတွက် ပိုမိုထိရောက်တဲ့counselling ကို ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(Reference-4questions pharmacists should ask their customers written by Jemar Nicdao from MIMS)